La Trilogie d'Exception ururinta Léoville Las Cases - Palmer - Figea - Wevino.store
Cinwaan Default - La Iibiyay
Daabacaadda cusub, ee xaddidan "Trilogie d'Exception"Kiiska wuxuu u dabaaldegayaa saaxiibtinimada ka dhaxeysa seddex magac oo muhiim ah Bordeaux iyada oo loo marayo seddex khamri oo muhiim ah. Chateaux Figeac, Kiisaska Leoville iyo Palmer soo bandhig taariikhdooda iyo aqoontooda iyadoo loo marayo kiiskan quruxda badan ee alwaaxda ah, kaasoo isu keenaya kaliya seddex khamri oo gaar ah, laakiin sidoo kale seddex halyeey oo halyeey ah.
Muujin dhab ah oo ku saabsan heerka sare ee dhismayaashaas waaweyn iyo tayada daa'im ee argagaxintooda weyn, kiiskan waxaa lagu soo saaray tiro kooban, iyadoo kaliya la helay nuqulo gaaraya 1,500 nuqul nooca dhalada ah iyo 330 nuqul oo ah nooca dhalada magnum. Kiisku wuxuu isu keenayaa sharafta sare ee Chateau Leoville Las Cases 2000, Chateau Palmer 2005, iyo Chateau Figeac 2010, iyagoo si fiican u fasiraya qiyamka ay wadaagaan seddexdan hanti: hamigooda, dhaqankooda iyo qiyamkooda qoys.
Kiis kasta oo «La Trilogie d'Exception» waxaa ka mid ah:
- 1 dhalo Chateau Leoville Cases 2000 ka Chateau Leoville Kiisaska Las.
Xaaladaha wanaagsan ee cimilada ee guriddaan waxay u oggolaadeen goosashada canab si fiican isu dheellitiran oo aad u urursan. Natiijadu waa khamri macaan iyo midho. Qaab-dhismeedkiisa dhammaystiran wuxuu ku fidsan yahay dhammayn dheer, af-buuxinta
- 1 dhalo oo ah Chateau Palmer 2005 ka Chateau Palmer.
Guridda guridda ee 2005 waa mid xiiso leh, xitaa sixir. Xaqiiqdii ma dhici doonto, xitaa sannado badan ka dib, in la bixiyo raaxo aad u daran. Cayiman, hodan ah oo daran, khamrigan wuxuu bixiyaa dhadhan fiican.
- 1 dhalo oo ah Chateau Figeac 2010 ka Chateau Figeac.
Guridda 2010 waxaa lagu tilmaami karaa mid ka reeban guud ahaan Bordeaux, iyo gaar ahaan Chateau Figeac. Qurux badan oo kakan, khamrigan waa mid aad u jilicsan, oo hadana ka buuxa ganaax iyo shaqsiyad badan. Tani waa heer sare oo Premier Cru Classe ah.
Kuwa khamriga jecel iyo kuwa wax soo uruuriya ayaa lagu casuumay inay (dib u soo) ogaadaan, iyada oo loo marayo seddexdan nooc ee khaaska ah, the quintessence iyo ruuxa saddexda tixraac ee Bordeaux.